ပြည်သူ့ရဲ ဆိုသူများက “လဝက ” ဌာနမှ ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို ဘာကြောင့် အသိအမှတ် မပြုရတာလဲ? | Danya Wadi
»ဥပဒေ»ပြည်သူ့ရဲ ဆိုသူများက “လဝက ” ဌာနမှ ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို ဘာကြောင့် အသိအမှတ် မပြုရတာလဲ?
Posted by danyawadi on November 3, 2016 in ဥပဒေ, ဆောင်းပါးများ
နိုဝင်ဘာ ၂ ၊ ၂၀၁၆
ဂျက်ဖရီတင်အုန်း ( R.I.T ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် )
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံများထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အထွေထွေညီလာခံကြီးက လူ့အခွင့် အရေးကြေညာ စာတမ်းကြီး ကို တခဲနက်ထောက်ခံအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်နိုင်ငံများတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းတွင် အပိုဒ်ပေါင်း( ၃၀ )ပါဝင်သည်။
အပိုဒ် ( ၉ )အရ “ မည်သူမျှဥပဒေအရမဟုတ်သော၊ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ပြည်နှင် ဒဏ်ပေးခြင်းကိုဖြစ်စေ၊မခံစေရ” ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ အပိုဒ် ( ၁၃ ) (၁)အရ “လူတိုင်းတွင် မိမိ၏နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တွင်း၌ လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခွင့်၊ နေထိုင်ခွင့် ရှိသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အပိုဒ် ( ၁၅ ) ( ၁ ) အရ “ လူတိုင်းသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ရှိသည်။” အပိုဒ် ( ၁၅ ) ( ၂ ) အရ “ ဥပဒေ အရ မဟုတ်လျှင် မည်သူမျှ မိမိ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်းမခံစေရ”ဟူ၍ဖော်ပြထားချက်များကို ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြု သည့် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များသည် အထူးလေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးရ မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စာရေးသူ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ရသည့် ဥပဒေမဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို စာရေးသူထံရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
၂၆.၁၀.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ၊ ညနေ ( ၅ ) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှမြိတ်မြို့သို့ “ အောင်ရတနာ” ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါလာသော ခရီးသည် ( ၃ )ဦး သည် ၂၇.၁၀.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ည( ၇ )နာရီတွင် ညမြိတ်မြို့၊ ကန်ခေါင်းရပ်ကွက်၊ ပန်းဝတ်ရည်လမ်းရှိ တိမ်လွှာထွန်းတည်းခိုခန်း တွင် တည်းခိုနေစဉ် “ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ သုံးဦး ထိုတည်းခိုခန်းတွင် ရောက်ရှိနေသည်” ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မြိတ်ခရိုင် ရဲအုပ်ခင်မောင်လေး၊ ဒုရဲအုပ် ကျော်ဆန်းဦးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံတော်၏ တရားဝင်ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုဖြစ်သည့် “ အလုပ် သမား၊ လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန” မှ တည်ဆဲဥပဒေအရ တရားဝင်စိစစ် စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပေး ထားသော ခိုင်လုံသည့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု့ အထောက်အထားများ ရှိနေသူများကို တစ်ဘက်သတ် စွပ်စွဲတိုင်တန်း ချက်များကြောင့် မတရားဖမ်းစီး စစ်ဆေးခံရသည့် သတင်းသည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ မလုံခြုံမှုကိုပြနေကြောင်း စာရေးသူသတိထားမိသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း စေ့စေ့တွေး ရေးရေးပေါ် ဆိုသည့်အတွက် ထိုဖမ်းဆီးခံပြည်သူ ( ၃ )ဦးအား လေ့လာကြည့်ရာ တွင် ၁။ ဒေါ်သီတာ ( ၄၇ ) နှစ်၊ မှတ်ပုံတင် ၁၂/ ဒဂတ(ယ)**** (ဘ) ဦးမောင်တင် ၂။ဒေါ်သန်းသန်းအေး ( ၄၉ ) နှစ် မှတ်ပုံတင် ၁၂/ဒဂတ(ယ)****** (ဘ) ဦးအဗ်ဒွလ်ဂျဗား၊ ၃။မရွှေစင် ( ၂၀ ) နှစ် (ဘ) ဦးရွှေလာ ကရင်လူမျိုး (၃)ဦးတို့ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေး “ လဝက” ဌာနမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော မှတ်ပုံတင်ဖြင့် စစ်မဲ့ဇုန်နယ်မြေ တစ်ခုရှိ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် အနားယူနေသည်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင် နယ်မြေရှိ လူမျိုးများ ပုံစံရောသမ မွေကာ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီး အရေးယူနေခြင်းသည် ကမ္ဘာ့အလယ်မြန်မာပြည် တွင် နေထိုင်နေကြသော တရားဝင်မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် တရားဥပဒေ၏ အကာအကွယ်မရရှိသေးကြောင်း ကမ္ဘာက သိသွားခဲ့လျှင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြည်ပ ခရီးစဉ်များတွင် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများနှင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွား ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို မြန်မာပြည်တွင်း စီးပွားရေးလာလုပ်ကြရန် အာမခံပြောဆို ဖိတ်ခေါ်သည့် စာချွန်လွှာ များရေးထိုးခဲ့ကြသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အားလုံးသည် အောက်ခြေရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏လုပ်ရပ်ကြောင့် “သဲထဲရေသွန်” အချည်းနှီးလုပ်ရပ်များ ဖြစ်သွားနိုင်သည်ကို အစိုးရသစ်အားထောက်ပြလိုပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မူဆယ်မြို့နယ်နေ မောင်ဖြိုးသူရအား ရဲစခန်းတွင် စစ်ဆေးစဉ် ကွယ်လွန်သွားသည့်ဖြစ်ရပ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် အချုပ်သားတစ်ဦး အချုပ်ခန်းအတွင်းသေဆုံးနေသည့်ဖြစ်ရပ်ကို မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားသူကြီး ကိုယ်တိုင်လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ်များသည် လူအခွင့်အရေးကို ဦးထိပ်ပန်ဆင် ကျင့်သုံးသည့် အနောက်နိုင်ငံများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအစုစုတို့ကို စိန်ခေါ်လျက်ရှိပေသည်။ “ကျီးလန့်စား၊ စားရသလို” မျိုးဖြစ်နေခြင်းသည် နိုင်ငံ၏အနာဂတ် အတွက် ဆူးညှောင့် ခလုတ်များဖြစ်နေသည်။
“ကူညီပါရစေ” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ပါမည်ဟု ပဋိဥာဉ်ပြုထားသော သစ္စာခံထားသော ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် ၅၁.၄ သန်းကျော် ပြည်သူလူထု၏အခွန် ကိုစားနေရသော ဝန်ထမ်းသက်သက် မျှသာ ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုအား ဟိန်းဟောက် ခြိမ်းခြောက်ရန် တာဝန်မရှိပြီ။ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ် များကို တားဆီး ဟန့်တား အရေးယူရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသော တရားဥပဒေများ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရန် လုံးဝ တာဝန်ရှိပေသည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ” ဟူသည် နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်သူတို့နှင့် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူလူထု တို့အကြား ချုပ်ဆိုထားသော “ပဋိဥာဉ်”စာချုပ်ကြီးဖြစ်ပေသည်။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူလူထု တို့ အကြားလေးစား လိုက်နာဖို့လိုသည်။ ဥပမာ ပြရလျှင် ၂၀၀၈ ခု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၇ နှင့် ၃၄၈ တို့တွင် “မည်သူမဆို ဥပဒေ အရာတွင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည့်အပြင် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည့်အပြင် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီ မျှ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုးဇာတိ ကိုးကွယ် သည့်ဘာသာ ရာထူး၊ ဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆင်းရဲချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားခြင်းမပြုရ” ဟူ၍ ဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ( ၃၆၂ )တွင် “ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ နတ်ကိုးကွယ် သောဘာသာ တို့ကို နိုင်ငံတော်တွင် တည်ရှိနေသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာများ” ဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုထားကြောင်း ဖော်ပြထား ပါသည်။ ထို့အပြင် ပုဒ်မ( ၃၆၃ ) တွင် နိုင်ငံတော်တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာ သာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည် ဟူ၍လည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး တပ်မတော်ဖခင်ကြီး ၁၉၄၄ ခုနှစ် မတ်လ ( ၁၃ )ရက်နေ့၌ မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဆင်းပွဲနှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပေးအပ်ပွဲ၌ မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ “ ငါတို့စစ်တပ် ဟာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေကို ညှဉ်းဆဲဖို့မဟုတ် လက်နက် အားကိုး တန်ခိုးပြဖို့မဟုတ် စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့ အစေခံဖြစ်ရမယ်။ နိုင်ငံဟာ စစ်တပ်ရဲ့ အစေခံမဖြစ်စေရဘူး” ဟူသော မိန့်ကြားချက်များနှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့ဖူးသည့် အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူလူထုဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် တိုင်းပြည် အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်ကန့်သတ် စေခိုင်းထားတဲ့ သစ္စာအရှိဆုံး ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာကို နှလုံးသွင်း ကာ လိုက်နာကျင့်သုံးလျှင်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်များတောင့်တင်း ခိုင်မာလာမည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အသက်ဝင်လာပေမည်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်စီးသည့်မြင်းသည် အထီး၊ အမ ဟူ၍ မခွဲခြားဘဲ ဇွတ်စီးပြီး ခရီးနှင် လျှင် စစ်ခင်းလျှင် စစ်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်မည်သာဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် သံဃာ့ မဟာနာယက ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ က မိန့်တော်မူသည်မှာ “လူဆိုး၊ လူကောင်းဆိုတာ လူမျိုးနဲ့မဆိုင် ဘာသာနဲ့မဆိုင် ထိုသူတို့ပြုမူ သော လုပ်ရပ်အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပြီး လူဆိုးလား လူကောင်းလား သတ်မှတ်ရတယ်” ဟူသော တရားရတနာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ကာ လူတိုင်းကျင့်သုံးပါက မြန်မာပြည်ကြီး ဘာသာ ပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေးမှ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ရရှိပေမည်။ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရလျှင် ပြည်တွင်းပြည်ပရန် ကာကွယ်ရန် စစ်အသုံးစရိတ်များ လျှော့ချနိုင် ပြီး ပညာရေး အသုံးစရိတ်များ တွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေများကို ပုံအောနိုင်မည်။ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည်။ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များစွာ မွေးထုတ်နိုင်မည်။
ထိုစွမ်းအားများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် လုပ်နိုင်ပါမည် ဟု အကြံပြု တိုက်တွန်း လိုက်ရပေတော့သည်။
ဂျက်ဖရီ တင်အုန်း R.I.T ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်
← မှတ်ပုံတင် မရသေးသူများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပဒေများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဂျပန်မှ ပေးသည့် ယန်း ဘီလီယံ ၈၀၀ မှ ၄၀ ဘီလီယံ ကို ရိုဟင်ဂျာများ အတွက် သုံးစွဲမည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြော ကြားခဲ့ →